Wow! Zvirinani bhuku rako ndege yeLufthansa kubva kuEurope kuenda kuUnited States izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Wow! Zvirinani bhuku rako ndege yeLufthansa kubva kuEurope kuenda kuUnited States izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • USA Kuputsa Nhau
Lufthansa Inobhururuka 76,000 Vanhu Vanobva kuFrankfurt Airport paKutanga Kwezororo Svondo
Inenge vhiki mushure mekuguma kwakarongwa kwekurambidzwa kwekufamba kweUS, ndege dzendege dzeLufthansa Group dzaive dzichisangana nendege kuenda kuUnited States.
Pane mamwe mazuva muvhiki rapfuura, ndege dzinoyambuka Atlantic dzakakwira zvakapetwa katatu pasvondo rapfuura. Kudiwa muvhiki rapfuura pane dzimwe nzira dzakapotsa dzasvika pre-dambudziko
nhanho. Ndege neSWISS kubva kuZurich neLufthansa kubva kuFrankfurt kuenda kuNew York uye kubva kuFrankfurt neZurich kuenda kuMiami kwaive nemabhezari epamusoro kubva kune vese vafambi uye vebhizinesi vafambi. MuPrimiyamu Economy, Bhizinesi uye Yekutanga Kirasi matikiti akawanda kuenda kuUSA akatengwa kupfuura panguva imwechete muna 2019.
Inenge vhiki mushure mekuguma kwakarongwa kwekurambidzwa kwekufamba kweUS, Lufthansa Boka
ndege dziri kusangana nekuwedzera kuwedzera kwendege kuUnited States. Pane zvimwe
Mazuva muvhiki rapfuura, ndege dzinoyambuka Atlantic dzakakwira zvakapetwa katatu pamusoro pe
Kudiwa muvhiki rapfuura pane dzimwe nzira dzakapotsa dzasvika pre-dambudziko
nhanho. Vols ne SWISS kubva kuZurich neLufthansa kubva kuFrankfurt kuenda kuNew York
uye kubva kuFrankfurt neZurich kuenda kuMiami vaive nemabhaisikopo epamusoro kubva pazororo rese
uye vafambi vebhizinesi.
MuPrimiyamu Economy, Bhizinesi uye Yekutanga Kirasi matikiti akawanda kuenda kuUSA akatengwa kupfuura panguva imwechete muna 2019.
Lufthansa Boka riri kusangana neiyi boom mukukanda kwepent-up nekutanga zvimwe
nendege kuenda kuUSA pane pfupi ziviso. Lufthansa uye SWISS, semuenzaniso, ichave ichipa huwandu hwakabatanidzwa hwendege nhatu dzezuva nezuva kuenda kuMiami pachiziviso chipfupi kutanga mu
Pane kudiwa kwakasimba kwazvo kwendege dzinoenda kuU.SA kwekuuya kwaZvita. Nyowani
kubhuka muvhiki yapfuura yemwedzi uno zvaive zvakakwirira sezvazvaive zve2019 zve
nguva imwe chete iyoyo. Vols kuNew York - pachinyakare kudiwa kwakanyanya panguva
mwaka weKisimusi - akatosimbiswa nehukama hwekuwedzera.
Ndege dzeLufthansa Boka dziri kupa anosvika makumi mashanu neshanu ekubatana kwevhiki ku
New York kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzeEurope muAustria, Belgium, Germany uye
Switzerland muna Zvita. Kuwedzera kwekuwedzera kwenguva pfupi kwemasevhisi parizvino
Ndega kuNew York neChicago, ndege dzeLufthansa Group dzinopa kwakawanda kubatana kwezuva nezuva kubva kuEurope munaNovember kupfuura ndege kuenda kunharaunda yese yeAsia-Pacific.
Lufthansa Boka rinotarisira kuti kuvhurwa kweUS kubaya vachengeti veEU
chichava mucherechedzo kune dzimwe nyika nematunhu kuita kuti nendege dzenyika dzese dzive nyore zvakare nekudzosera kumashure zvirambidzo zvekufamba.
Dzimwe ndege zvakare mukati meGerman
Lufthansa Group iri kuwedzerawo nendege dzekuGerman kudzimba dzayo dzekuEurope
sezvo kudiwa kwendege dzeUS kunoramba kuchikwira. Semuenzaniso, uchienzaniswa naJuly,
Lufthansa iri kuwedzera nendege dzayo dzekunze dzeGerman ne45 muzana kubva kutanga mukati
Gumiguru. Izvi zvinoreva, pakati pezvimwe zvinhu kuti kubva muna Gumiguru kuchave nemapfumbamwe panzvimbo pendege nhanhatu dzemazuva ese kubva kuFrankfurt kuenda kuBerlin. Kubhururuka kubva kuFrankfurt kuenda kuHamburg kuchawedzera kubva pamatanhatu kusvika masere nendege zuva nezuva. Mamiriro acho akafanana neMunich:
Idzi shanu dzemazuva ese dzekubatana neBerlin dzichawedzerwa kusvika manomwe kutanga mu
Gumiguru; panzvimbo pendege nhanhatu dzezuva nezuva kubva kuMunich kuenda kuHamburg, pachave nekukwira kusvika
11 dzendege dzezuva nezuva mune ramangwana. Uye zvakare kutanga munaGumiguru, Lufthansa ichashanda zvakare ndege dzemaawa kubva kuHamburg neBerlin kuenda kunzvimbo dzayo muFrankfurt neMunich mangwanani nemanheru.
Nekuwedzera kwechirongwa chekubhururuka, zvimwe zvinongedzo zvinowanikwa mukati me
zuva. Izvi zvinoreva vafambi vebhizinesi vanowanzo kuda kubhururuka mangwanani kana iyo
manheru anozobatsirwa nehurongwa hwekuvandudza ndege sezvichaita vamwe vafambi.
Russia inowedzera Italy itsva, Vietnam, Azerbaijan, Kyrgyzstan...
42% yeBrits vangafunga kuenda kuzororo muSaudi...
Mahara Endege Matikiti: Ontario kuenda Reno-Tahoe